Rohingya Students Forum: November 2017
ေမ့သြားခ်င္တယ္ [အာရ္ေက ကဗ်ာ]
တို႔ၾကား ရိွေတာင္မရိွခဲ့တဲ့ ထိုသံေယာဇဥ္ေတြ
တစ္ခါမွ မျဖစ္ခဲ့တာ ဟိုဟိုဒီဒီ အလံုးစံုကို
ေရးဖြဲ႕ 📝 ႐ိုေသြး
[ႏိုဝင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၇ (၁၀း၃၀)]
Posted by Rohang king at 4:05 AM
✳ Soól ar Bállukkia ✳
EK DIN, ugguá Soól déki kiílorttú wafes aité ugguá bállukeháito duñrar cúru. Zehón te árinofaribodé dekér, fíri oré tíyaiyé. Tarbaáde hoódde, “O dusto bálluk, aññí hoifari, ajja aññí hamahá tor adár boinnum. Mogor mui moribár age mor ekkán azzu fura. Tui murali mata ar tor muralir súre ekká nasi loi.” É hotát Bállukkia razi oiyé. Te murali baar, soollia naser. Étunót, hodun rañgkuiñrebací abas fúní duñri accé. Baade bállukia re lora cúru. Ballikesool or íkka fíri hoór dé, “E halot yían aññár laikka, kiyóllá hoilé, aññí dé cúde dorí mari gusto hooyá, toré kúci gorí bollá murali bazoya no bonon accíl.”
Foran áraibar októt, saláki buddí bone sabí.
Tuáñr sam basaité, Tuáñr ducmon oré feñs ahol loi zito.
✳The Kid and the Wolf✳
In time of dire need, clever thinking is key or Outwit your enemy to save your skin.
Posted by Rohang king at 12:29 AM
Labels: Aesop's Fable, jokes, Rohingyalish
Gaáillá Halu ar añtur Bálluk
Lekóya 🔲 Fáida Halu |
Ek motto, Fara ekkán ót bicí gaáillá uggúa Gaáillá Halu accíl. Honó ham nogorí hána-finá endé faiballá hámicá báfát táitó.
Ek biínná, farat mazé te berai berai Séb suri gorí bollá buddí accé. Séb sur goréddé ére girossé dekí dóri bollá lorai loi giyé.
Gaáillá Halu yó dhore ate hañsór murat duñri góile gói. Murát añri zar de ére cúde duián théñg asédé añtur Bálluk ugguá dikké. Gaáillá Halu báferde “añtur bállukkia keén gorí adar há. Añtur bállukkia ite duñriyó nofaré, adar tuwai yó hái nofaré, oinno januwaror hotáráre yó dhora fore. Mogor te tar ataraf ot ámburi amburí kúci asé. Ite adar keén gorí há Saáforibó, saiyúm!"
Étunót galot mazé gusto ekkán loi cíñgo ugguá bálluk ór hañsé aiyérdé Gaáillá Halu ye dikké. Gaáillá Halu ye dhore gas ugguár uore uitthé gói. Balluk wá añtur de étolla íyañt taái zágói foijjé. Kintu cíngo wáyé adar hái bálluk orllá gusso hodun raikké dé íyan Gaáillá Halu ye cúndorgorí kíyal goijjé.
Gaáillá Halu tú Allahr íkka asimbit díyan giyói. “Iin Allah taála ye banaiyéde. Allahr tú mancórlá yó entezam táibio” hoi te kíyal goijjé. Tarlá yó Allahr tú entezam asé bóli báfi íyañt mazé honíkkia yé hána anidené soiñ roiyé. Éndilla kessú nohái waccá soiñ roiyé dé2din fojjonto óigiyói. Hánar honó dahá nái.
Akhérít waccá boddaic gorí nofari hánar jinis hono ekkán tuwaitó farat góille. Ére ugguá Buddí bán Burír loót faiyé. Buri wá ré tar halot ekkuttú lotí buzaiyé. O buddi ban dadi… Allah ye O añtur bálluk wa ré raham goijjé, moré kintu honó raham ká no gorér? hoi fusár loiyé.
Burí dadi ye juwab dedde, Allahr tú fotti zonollá entezam asédé yían sóyi. Torllá yó Íbartú entezam asé. Kintu o náti tui uldha buzor… “Allahr tú toré bállukór dikká nobanai cíñgor díkká banai tó moncá oiyé dé óibo.”
Barbar mancé zindegit loot fade, dekédé ciz okkól oré uldha buzé. Allahr tú bec-hom nái. Allah yé biggun oré fúwan hoq diya. Fotti gán oré bála nozore saái bállá kucíc gorí, nizor dil oré nize mosbut goríbár adot banai óre modot gar oré modot goríbár kucíc goró. Antaiccá faisélá noloiyó. Sóyi rastar uoré soli faribár tofík douk…hoi burí dadiyé nosíyot gorí buzái diyé.
Yaa lotí Gaáillá Halu lagatar kucícór duara ugguá dhoñr dóni boni giyégói. Hazar hazar mancór saára boinné…Gaaillá halu…®
Posted by Rohang king at 8:57 AM
ကမာၻ႔အမည္းနက္ဆံုးပစၥည္းကို ၂၀၁၈ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ပြဲေတာ္အတြက္ ဖန္တီး
ကမာၻ႔အမည္းဆုံး လူလုပ္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းခံရတဲ့ Vantablack ဟာ မည္းနက္လြန္းတဲ့အတြက္ လူမ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ရႈရင္ေတာင္ အျမင္လြဲမွားမႈေတြျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ Vantablack ဟာအေရာင္တစ္ခုဟုတ္ပဲ အေရာင္ဆိုတဲ့ ျဖစ္တည္မႈမရွိတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
Vantablack ကို အဂၤလန္ပညာရွင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ Surrey NanoSystems က လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္ခန႔္က စတင္ဖန္တီးခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး Vantablack ဟာ မည္းနက္လြန္းတဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚက်ေရာက္တဲ့ အလင္းေရာင္ရဲ႕ 99.96 % ကို စုပ္ယူႏိုင္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။
Vantablack ပစၥည္းကို အေဆာက္အဦးတစ္ခုရဲ႕ သုတ္ေဆးတစ္ခု အျဖစ္ သုတ္ထားတဲ့အခါမွာ Vantablack ေတြဟာ အရာဝတၳဳေတြရဲ႕ ရႈေထာင့္ကို ေျပာင္းလဲေစမွာ ျဖစ္ၿပီး 3D ရႈေထာင့္ ပစၥည္းေတြကို လုံးဝျပားသြားတဲ့ ပုံစံနဲ႔ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
“ဒီပစၥည္းဟာ သိျမင္ျခင္းရဲ႕ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းေတြကို ခ်ိဳးဖ်က္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ ပစၥည္းဟာ အလင္းျပန္ေပးရ မယ့္အစား အလင္းေရာင္ကို စုပ္ယူေပးတဲ့အတြက္ 3D ပစၥည္းေတြကို 2D ပစၥည္းေတြ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဗိသုကာပညာရပ္မွာ တိုးတက္မႈႀကီးတစ္ခုပါပဲ ”လို႔ Vantablack ပစၥည္းကို တီထြင္တဲ့အဖြဲ႕ထဲက ဗိသုကာပညာရွင္ အဆစ္ခန္(Asif Khan) က CNN သတင္းဌာနကိုေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
Vantablack ပစၥည္းကို အသုံးျပဳထားၿပီး တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ၿဗိတိန္ဗိသုကာ လက္ရာ အေဆာက္အဦးတစ္ခုကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေတာင္ကိုရီးယားမွာက်င္းပမယ့္ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္မွာ ျပသသြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။
ဒီအေဆာက္အဦးမွာ ဆိုရင္ ေကြးေကာက္ေနတဲ့ နံရံေတြ ပါဝင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားေပမဲ့ Vantablack ပစၥည္းေၾကာင့္ အေဝးကၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အမည္းေရာင္နံရံႀကီးတစ္ခုကိုသာ ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာက္အဦးရဲ႕ နံရံေတြထဲမွာ မီးလုံးေလးေတြ ထြန္းထားမွာ ျဖစ္ၿပီး ဒီမီးလုံးေလးေတြဟာ ညဘက္ေကာင္းကင္ျပင္မွာ မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္လင္းေနတဲ့ ၾကယ္ေလးေတြနဲ႔ တူမွာ ျဖစ္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။
Vantablack ပစၥည္း ၁ စတုရန္း စင္တီမီတာမွာ ကာဗြန္ အေသးစားႁပြန္ေလးေတြ ၁ ဘီလီယံ ခန႔္ပါဝင္ၿပီး အလင္းဝင္ေရာက္လာတဲ့အခါ အလင္းဟာႁပြန္ေလးမ်ားၾကား ပိတ္မိၿပီး အပူအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Vantablack ပစၥည္းျဖန္းေပးႏိုင္တဲ့ Vantablack S-VIS ဆိုတဲ့ ပစၥည္းလည္းရွိၿပီး ဒီကိရိယာဟာ အရာဝတၳဳေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာ ျပင္ေပၚ Vantablack ကိုျဖန္းေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Vantablack ကို တီထြင္တုန္းကေတာ့ အာကာသ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းေတြအတြက္ တီထြင္ခဲ့တာ ျဖစ္ေပမဲ့ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေနပါတယ္။ Vantablack ကိုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ နာရီထုတ္လုပ္တဲ့ ဆြီဒင္ကုမၸဏီ MCT ကေန႔ ေဒၚလာ ၉ ေသာင္းခြဲတန္ နာရီ ထုတ္လုပ္ရာမွာ အသုံးျပဳထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ဒီနာရီမွာဆိုရင္ Vantablack ကို ေနာက္ခံအျဖစ္ သုံးထားတာေၾကာင့္ အလင္းေရာင္ထည့္ထားတဲ့ နာရီလက္တံေတြက အာကာသထဲမွာ ေမွ်ာေနတဲ့ ၾကယ္ပြင့္ေတြနဲ႔ သ႑ာန္တူေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Vantablack ကို ဆြီဒင္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီကလည္း တယ္လီစကုတ္ထဲကို အလင္းမဝင္ေအာင္ အသုံးျပဳထားၿပီး Vantablack ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာမွ အလင္းမ်ားသာဝင္မွာ ျဖစ္ၿပီး တျခား မလိုအပ္တဲ့ အလင္းေတြ မဝင္ေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးမွာျဖစ္တယ္ လုိ႕သိရပါတယ္။
Ref : News : Darkest material on Earth
Posted by Rohang king at 10:48 AM
Labels: science, sports, သုတ
သုညဘဝ [Zero Life]
💫 သုညဘဝ 💦
ျပကၡဒိန္ ေန႔ရက္၊ ရြက္ေႂကြတေစ
အတိတ္ေရစီးနဲ႔၊ ‘ဘ’ကို တိုက္စား
‘ဝ’ သာက်န္ေတာ့၊ သုညက်ဳိးနပ္ကယ္
ႏိုဝင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၇၊ ၆း၅၃ PM (တနလၤာ)
Posted by Rohang king at 10:30 AM
ဆြလာသ္ [RK ကဗ်ာ]
ျဖဴစင္ နိယာသ္၊ ဆႏၵျပဳ။
သဟ္ရီမာ သဂ္ဘီရ္ အစဦး
သာဝူဇ္၊ သဆ္မီယာ၊ ဌာန္မွန္စြာ။
ဖာသိဟ စနာ၊ ရြတ္ဖတ္ကာ၊
စူရာဟ္ တစ္ပုဒ္၊ ေနာက္လိုက္ပါ။
႐ူကုဟ္ ျပဳစဥ္၊ အေနမွန္ရင္း
ဆူဘာဟာနာဟ္ ရဗၺီအုလ္ အဇီးမ္။
႐ူကူဟ္ ျပန္ထ၊ ရဗၺာနာဟ္
လေကာလ္ ဟမ္ဒူ၊ ခ်ီးမြမ္းၾက။
စဂ်ီဒါဟ္ ဦးခ်၊၊ စံု တစ္တြဲ
ဆူဘာဟာနာဟ္၊ ရဗၺီအုလ္ အာလာနဲ႔ေလ။
အလႅာဟု အကၠဘရ္ ဆိုပါေလ။
ေနာက္ဆံုး အထိုင္၊ သခ်္ဟူးဒ္
ရြတ္ဆို ဒူအာႏွင့္ ဒူရုဒ္
ညာဘယ္ ႏွစ္ဘက္၊ စလာမ္လွည့္၊
လိုရာ ေတာင္းရင္း၊ အဆံုးသတ္ေလ။
တစ္ေန႔ ငါးႀကိမ္၊ ဝတ္ခ်ိန္မွန္
နိဗၺာန္ စံရာ၊ ေရႊေသာ့တံ
သားတို႔သမီးတို႔ လိမၼာေရး။ ။
[ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၇၊ ၅ း၂၇]
Posted by Rohang king at 6:00 AM
Labels: poem, ဘာသာေရး, သုတ
ရှာရန်မြန်မာပြည်ရောက် အိန္ဒိယ ဘုရင်
အန်ဘာရာဆန် အီသီရာဂျန်ဘီဘီစီ ရန်ကုန်
10 နိုဝင်ဘာ 2017
ဓာတ်ပုံ မူပိုင်THE BRITISH LIBRARY
Image captionဒုတိယ ဘဟာဒူး ဇဖာရှား
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်သွားတဲ့ နိုင်ငံခြား ဘုရင် သုံးပါးထဲမှာ အိန္ဒိယက မဂိုဘုရင်က သင်္ချိုင်းရယ်လို့ အထင်အရှား ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီသင်္ချိုင်းကို ၁၉၉ဝ ကျော်မှ ပြန်တွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနှစ်တရာကျော် မေ့ပျောက် ခံနေရတဲ့ မဂို ဘုရင် ဇဖာရှားရဲ့ သင်္ချိုင်းကို ပြန်တွေ့ခဲ့တာဟာ သူ့ကို သူတော်စင် အဖြစ် ကြည်ညိုသူတွေ၊ အူရဒူ ကဗျာဆရာကြီး အဖြစ် လေးစားသူတွေ အတွက် အားတက်စရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကို ဒေလီမြို့ကနေ ဗြိတိသျှ တွေ ဖမ်းခေါ်လာပြီး အဲဒီတုန်းက သူတို့ သိမ်းထားစ မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ကို ပို့ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၈၆၂ ခု ရန်ကုန်က သိမ်သိမ်ငယ်ငယ် သစ်သားအိမ်တလုံးမှာပဲ ဇဖာရှား ကံကုန် ချိန်မှာ သူ့ဆွေမျိုးတစုသာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနေ့မှာပဲ ရွှေတိဂုံ ဘုရားနားမှာ သူ့ကို ဗြိတိသျှ အစိုးရက မထင်မရှား မြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ အနှစ် ၃ဝဝ ကျော် အိန္ဒိယ တိုက်ငယ်ကို အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ မဂိုမင်းဆက် ဘုရင်တွေအတွက် မလှမပ နိဂုံးချုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အက္ကဘာ၊ သြရန်ဇစ် စတဲ့ သူ့ရဲ့ ဘိုးတော် ဘေးတော် ဘုန်းကြီးတဲ့ မဂိုဘုရင်တွေနဲ့ မတူဘဲ ၁၈၅၇ က စစ်ဗာရီ ပုန်ကန်မှုကြီးမှာ သူ နန်းကျခဲ့ရပါတယ်။
ဗြိတိသျှ အရှေ့ အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီက လွှမ်းမိုးမှုကို မလိုလားတဲ့ အိန္ဒိယ တပ်သားတွေက ပုန်ကန်ရာမှာ ဇဖာရှားကို ခေါင်းဆောင်တင်ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီ ပုန်ကန်မှု ကျဆုံးပြီးနောက် ဘုရင်ကြီးကို သစ္စာဖောက်မှု၊ ပုန်ကန်မှုတွေနဲ့ ဖမ်းပြီး မြန်မာပြည်ကို ပြည်နှင်ဒဏ် ခတ်လိုက်ပါတယ်။
အကျယ်ချုပ် ဘဝနဲ့ သက်တော် ၈၇ နှစ်မှာ ဇဖာရှား ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ကဗျာတွေကတော့ ဆက်ပြီး ရှင်ကျန်ရစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ဇဖာ ဆိုတဲ့ ကလောင်အမည်က အောင်မြင်မှုလို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။
Image captionမဂိုဘုရင်ကို ဖမ်းဆီးခန်း
မဂို အင်ပါယာ ဟာ ၁၈ ရာစု ကုန်ခါနီးမှာ တန်ခိုးသြဇာတွေ ယုတ်လျော့လာပါတယ်။ ဇဖာရှား နန်းတက်တဲ့ ၁၈၃၇ မှာတော့ သူ့ပိုင်နက်ဟာ ဒေလီမြို့နား ဝန်းကျင်မှာပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ သြဇာခံတွေ အဖို့ သူဟာ ဘုရင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တခြား မဂိုဘုရင်တွေ လိုပဲ သူဟာလည်း ဂျင်ဂစ်ခန်နဲ့ တီမူးတို့လို မွန်ဂို ဘုရင်ကြီး တွေဆီက တိုက်ရိုက် ဆင်းသက်လာတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ နတ်ရွာစံတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တန်ခိုးအကြီးဆုံး မင်းဆက် တဆက် ဆုံးခန်းတိုင်တာ ပါပဲ။
သူ့နောက်လိုက်တွေ ခြေရာခံမလာနိုင်အောင် ဇဖာရှားကို ဗြိတိသျှ အစိုးရက မထင်မရှား မြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ သူဆုံးတဲ့ သတင်းက အိန္ဒိယကို ရောက်ဖို့ နှစ်ပတ် ကြာပြီး ဘယ်သူမှ သတိမပြုမိလိုက်ကြပါဘူး။
ဒီလို အနှစ် တရာကျော် တိမ်မြုပ် နေခဲ့ပေမယ့် ၁၉၈ဝ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ အိန္ဒိယ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေကြောင့် သူ့နာမည် ပြန်ထင်ရှားလာပါတယ်။
သူ့နာမည် မှည့်ထားတဲ့ လမ်းတွေလည်း ဒေလီနဲ့ ကရာချိမှာ ရှိလာသလို ဒါကာမှာလည်း ပန်းခြံ တခုကို သူ့နာမည်နဲ့ ပြန်မှည့်ခဲ့ပါတယ်။
ဇဖားဟာ သူတော်စင် ကဗျာဆရာ အဖြစ် ထင်ရှားသလို ဟိန္ဒူ မွတ်ဆလင် စည်းလုံးမှုရဲ့ အရေးကြီးပုံကို သိတဲ့ သူပါလို့ သမိုင်းဆရာ William Dalrymple က ပြောပါတယ်။
သူဟာ သူရဲကောင်း တော်လှန်ရေး သမား တယောက် မဖြစ်ခဲ့ ပေမယ့် သူ့ဘိုးတော် အက္ကဘာ ဘုရင်ကြီးလိုပဲ သည်းခံတရား အားကြီးတဲ့ လူမျိုးစုံ အစ္စလာမ် ယဉ်ကျေးမှုကို ဖော်ဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်လို့လည်း Dalrymple က ဆိုပါတယ်။
ဇဖာရှားရဲ့ ခမည်းတော် ဒုတိယ အက္ကဘာရှား က မွတ်ဆလင် ဖြစ်ပြီး မယ်တော် ကတော့ ရာဇပုတ် အနွယ် ဟိန္ဒူ မင်းသမီး တပါး ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ မူပိုင်GETTY IMAGES
Image caption၁၈၅၇ ပုန်ကန်မှုကြောင့် ဗြိတိသျှတွေ အထိနာ
မေ ၁ဝ မှာ အိန္ဒိယ မြောက်ပိုင်း မီရွတ်မှာ စစ်သားတွေ သူပုန်ထ၊ ပုန်ကန်မှုက ဒေလီ၊ အဂ္ဂရာ၊ လက်ကနောင်းနဲ့ ကန်ပူထိ ပြန့်
အနောက်တိုင်း စံတွေ၊ ဥပဒေတွေနဲ့ ခရစ်ယာန် ဝါဒကို ဖြန့်ချိရာက မကျေနပ်မှု ဖြစ်ခဲ့ကြ
ပန်ဂျပ်က ဆစ်ခ် တပ်တွေ၊ အနောက်မြောက် နယ်ခြားက ပထန်တွေကို သုံးပြီး ဗြိတိသျှက ပုန်ကန်မှုကို နှိမ်နင်း ၊ ဒေလီကို စက်တင်ဘာမှာ ပြန်သိမ်းမိ
နှစ်ဘက်စလုံး တဘက်နဲ့ တဘက် အပြန်အလှန် သတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ စွပ်စွဲ၊ သူပုန်တွေက ဗြိတိသျှ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေကို သတ်ဖြတ်သလို ထောင်နဲ့ချီတဲ့ သူပုန် တပ်သားတွေနဲ့ ထောက်ခံသူတွေကို သတ်တယ်ဆိုပြီး ဗြိတိသျှဘက်ကို စွပ်စွဲ
၁၈၅၈ ဇူလိုင်မှာ ပုန်ကန်မှု အဆုံးသတ်ပြီး အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီကို ဖျက်သိမ်း၊ ဗြိတိသျှ အစိုးရ အိန္ဒိယမှာ တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်မှု စတင်
ကိုးကား ။ ။ ဗြိတိန်နိကား စွယ်စုံကျမ်း၊ ဘီဘီစီ သမိုင်းဌာန
ရန်ကုန်က ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ လမ်းတခုမှာ ရှိတဲ့ ဇဖာရှားရဲ့ ဂူဟာ အိန္ဒိယရဲ့ လှိုင်းအထန်ဆုံး သမိုင်းတကွေ့ကို ပြန်သတိရစေပါတယ်။
Image captionရွှေတိဂုံ ခြေရင်းက သင်္ချိုင်းတော်
ဇဖာရှားကို အနီးတဝိုက်က ဗြိတိသျှ စစ်တပ်ဝင်းထဲမှာ မြှုပ်ထားမှန်း သိကြပေမယ့် ၁၉၉၁ ကမှ သူ့ဂူကို ရှာတွေ့တာပါ။ အဲဒီ တပ်ဝင်းထဲမှာပဲ သူ့မိသားစုကို ဖမ်းဆီးထားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြောင်းတူးတဲ့ အလုပ်သမားတွေက အုတ်ရိုးတခုကို တွေ့ရာကနေ ဘုရင်ကြီးရဲ့ ဂူမှန်း သိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မှ လူထု အလှူငွေနဲ့ ပြန်ပြီး မွမ်းမံ ထိန်းသိမ်းခဲ့ရတာပါ။
Image captionမဂိုဘုရင်ရဲ့ ရန်ကုန်ရောက် မိဘုရားကြီး
သူ့ဘိုးတော်တွေရဲ့ ကြီးကျယ် ခမ်းနားတဲ့ သင်္ချိုင်းဂူကြီးတွေနဲ့ မတူဘဲ ဇဖာရှားရဲ့ ဂူက သေးငယ်နှိမ့်ချလွန်းပါတယ်။ တံခါးဝမှာ သူ့နာမည်နဲ့ ဘွဲ့တော်ကို သံကိုင်းပေါ်မှာ ရေးထွင်းထားပါတယ်။ မြေညီထပ်မှာ သူ့မိဘုရားကြီး တပါးနဲ့ မြေးတော် မင်းသမီးရဲ့ ဂူတွေ ရှိပါတယ်။
အဲဒီအောက်က မြေအောက်ထပ်မှာတော့ ဘုရင်ကြီးရဲ့ ဂူကို နှင်းဆီပန်းတွေနဲ့ တခြား ပန်းပေါင်းစုံ ဖုံးလွှမ်းပြီး တွေ့ရပါတယ်။
မီးတိုင်ရှည် တခု ဂူပေါ်မှာ တွဲလောင်းကျ နေပြီး သူ့ရုပ်ပုံတွေကို နံရံမှာ ချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ နောက်တခန်းမှာတော့ ဗလီတခု ရှိပါတယ်။
ဒီ သင်္ချိုင်းတော် ဒါရ်ဂါတော်ဟာ ရန်ကုန်က မွတ်ဆလင်တွေ လာပြီး ပူဇော်ဝတ်ပြုရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
သူ့ကို ဆူဖီ သူတော်စင် လို့ မှတ်ယူကြတာမို့ လာပြီး ကြည်ညိုကြတာလို့ ဂူဗိမာန် စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့က ဘဏ္ဍာထိန်း ဦးအေးလွင်က ပြောပါတယ်။
သူ့ဂူနားမှာ လာပြီး တရားထိုင်ကြ၊ ဆုတောင်းကြ လုပ်ကြသလို ဆုတောင်းပြည့်ရင် လာပြီး လှူဒါန်းတာတွေ ရှိတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဇဖာရှား ဂူမှာ နှင်းဆီပွင့်တွေ ကြဲဖြန့်ထား
ဇဖာရှားဟာ အူရဒူ ဘာသာမှာ ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်သူမို့ သူ့ရဲ့ ဘဝ ကဗျာ အချစ် ကဗျာ တွေဟာ ထင်ရှားပါတယ်။
သူ့ကို ရေးစရာ စက္ကူနဲ့ ကလောင်တံ မပေးတဲ့ အကျဉ်းစံ ဘဝမှာတောင် ဘုရင်ကြီးဟာ မီးသွေးနဲ့ နံရံတွေမှာ စာစပ် သီကုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီကဗျာ တချို့ကို သူ့ဂူမှာ ရေးထွင်းထားပါတယ်။
ဧကရာဇ် တပါးအနေနဲ့ ဇဖာရှားဟာ စစ်တပ် တတပ်ကို မညွှန်ကြား နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူကို ရှေ့တင်ပြီး တော်လှန် ပုန်ကန်ခဲ့မှုဟာ ဟိန္ဒူနဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို ညီညွတ် စေခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးက ထောင်နဲ့ချီတဲ့ စစ်သားတွေ ဟာ မဂိုမင်းဆက်ကို ပြန်နန်းတင်ဖို့ အတွက် ဗြိတိသျှ တွေကို တော်လှန်ခဲ့ကြတယ်လို့ သမိုင်းဆရာတွေက ဆိုကြပါတယ်။
ဒီ ၂ဝ၁၇ မှာ ဒီပုန်ကန်မှုကြီး အနှစ် ၁၆ဝ ပြည့်ပေမယ့် အိန္ဒိယမှာတော့ ထင်ထင်ရှားရှား အမှတ်ရကြတာ မရှိပါဘူး။
အဲဒီ နိုင်ငံမှာ အမျိုးသားရေးနဲ့ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တာတွေ ရှေ့တန်းရောက်နေချိနမှာ ဇဖာရှားရဲ့ ဘာသာရေး အရ သည်းခံမှုက ထင်ထင်ရှားရှား ကနေ့ထိ ရှိနေပါတယ်။
သူ့ထီးနန်းနဲ့ နိုင်ငံကို လက်လွှတ်ခဲ့ရပေမယ့် သူတော်စင် ကဗျာဆရာကြီး အဖြစ် လူတွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို ဖမ်းစား ထားနိုင်ဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Rohang king at 10:17 AM
Labels: literature, well-known, သုတ
ကမာၻ႔အမည္းနက္ဆံုးပစၥည္းကို ၂၀၁၈ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္...
ရိုဟင္ဂ်ာကို လက္ခံရင္ ဗမာျပည္ ဘာဆုံးရႈံးမလဲ
NOLA HAÑZI: A Rohingya Traditional Soup
AA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔၏တုိက္​ပြဲ​ေၾကာင္​့ ​ေ...
အေတာက္အပႀကိဳက္ေသာ ကင္ညာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္
ပါကစၥတန္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဂ်ိႏၷာဟ္၏ သမီးေတာ္ ဒီနာ ဝါ...
Háil Bisáná Noiya San